အပူထုတျ ရခြေိုးနညျး - Latest Myanmar News
June 7, 2021 by Latest Myanmar News
မွနျမာ့ရိုးရာနညျးပညာပါ၊ ငှမေကုနျလူမပငျပနျးပဲ အလှနျကောငျးသောနညျးမို့ကူးယူဖျောပွပေးတာပါ။ မိမိကိုယျတိုငျလညျး ကငျြ့သုံး နပေါတယျ။
အသကျအရှယျရလာလငျြ အပူအပုပျအခိုးအကငျးမြားခန်ဓာအတှငျးမှာကိနျးအောငျနတေကျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ဇီဝကမ်မလှညျ့ပတျမှုကဆြငျးသှားလို့ပါ။
သနျတုနျးမွနျတုနျး.(၂၃)အရှယျမဟုတျတော့ပါဘူး။ ခန်ဓာကိုယျဖှဲ့စညျးပုံမြားအားလညျးကဆြငျးကုနျကွပါပွီ။ အအိပျအစားအနအေထိုငျပွုမူဆောငျရှကျမှုမြားလညျးဆငျခွငျကွရတော့မှာပါ။
ကံ စိတျ ဥတု အဟာရ နဲ့ သာ အညီနထေိုငျစားသောကျပွုမူကွပါကုနျ။
လူတှမှော ငုပျလှောငျအောငျးနတေဲ့ အပူရှိပါတယျ။ ဒီအပူတှကေို ရခြေိုးပွီးမထုတျရငျ အန်တရာယျရှိပါတယျ။ အောငျးပူတှကေို စံနဈတကမြထုတျဘဲ ကနျထှကျစမေယျဆိုရငျ အန်တရာယျရှိပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ရခြေိုးနညျး မှနျဖို့ လိုပါတယျ။ ရောဂါရှိသညျဖွဈစေ၊ မရှိသညျဖွဈစေ လူတိုငျးအတှကျ အောငျးပူတှေ ထှကျစမေယျ့ ( အနှိပျမခံဘဲ )အပူထုတျတဲ့နညျးကို ပွောပွပါ့မယျ။
၁ ။ ရမေခြိုးခငျ အပူထုတျနညျး မနျကညျြးရေ ခပျကြဲကြဲ ခပျပါးပါးလေး ခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးကို ပှတျပါ။
၂ ။ဆားနညျးနညျးဖွငျ့ ဘယျခွဖေဝါးကို ညာလကျဖဝါးနဲ့၊ ညာခွဖေဝါးကို ဘယျဘကျလကျဖဝါးနဲ့ အလြားလိုကျ အကွိမျ ၅၀ – ခနျ့ ပှတျပါ။
၃ ။၁၀ – မိနဈကွာမှ ရခြေိုးပါ။
၄ ။ရခြေိုးရာမှာ ရကေို ဝုနျးကနဲ တနျးမခြိုးပါနဲ့၊ ခွရေေ လကျရကေို ဖွဈသလို စ မလောငျးပါနဲ့၊ ပေါငျအလယျ၊ လကျမောငျးအလယျ၊ အဆီရှိတဲ့နရောမှာ အပူခိုတာမို့ ပေါငျအလယျ လကျမောငျးအလယျက စလောငျးပွီး အစှနျအဖြားတှကေိုလောငျးပါ။
ပွီးတော့ မကျြနှာသဈမယျ။ တဈကိုယျလုံးခြိုးမယျ။ ဒီလို စိတျရှညျ လကျရှညျခြိုးပေးရငျ အပူတှေ တစိမျ့စိမျ့ထှကျစပေါတယျ။ အထူးမှတျသားရမှာက ဆားပှတျပွီး ရခြေိုးပါ။ ရမေခြိုးဖွဈဘဲ ဆားမပှတျပါနဲ့။
ည အခါညဈပလေို့ ခွထေောကျကို ရဆေေးရငျလညျး ခွောကျအောငျပွနျသုတျပါ။ ဒီလိုမဟုတျရငျ မကျြစိနာတတျတယျ၊ မကျြဝတျတှေ ထှကျတတျပါတယျ။
အပူထုတျနညျးနောကျတဈမြိုးကတော့ ရခြေိုးရငျ မနျကညျြးသီးsalt scrubလေးခွဖေဝါးကိုအရငျပှတျတယျ ခွဖေဝါးကနတေဖွညျးဖွညျးခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးထိတကျသှားပွီး တဈကိုယျလုံးကိုပှတျတယျ
မိနဈအနညျးငယျကွာတော့ရခြေိုးခလြိုကျ‌တယျ ပွီးလငျြ မနျကညျြးဆပျပွာလေးတိုကျပါတယျ salt scrubမသုံးဖဈတဲ့ရကျတှမှော အပူတှထေပျမံထှကျပွီး အသားအရညျကွညျလငျအောငျ သဘာဝမနျကညျြးအနှဈကိုပါ တကိုယျလုံးပှတျတိုကျပါတယျ ။
ရခြေိုးပွီး ကရမကျ၊သနပျခါးကို‌‌ ခွဖေဝါးကနစေတငျကာတဈကိုယျလုံး လိမျးလိုကျပါတယျ ကရမကျ၊သနပျခါး အစှမျးက‌တော့ ပွောစရာမလိုအောငျအပူကိုစုတျထုတျပွီး
မွနျမာဆေးကမျြးမြားအလိုအရ ..ကရမကျသညျခါးသကျသော အရသာရှိပွီးခြိုသညျ။ အေးကာ သလိပျကိုဖွဈစသေညျ။ လကေို တိုးစသေညျ။
အမွဈ ၊ အသားကိုသှေး၍ လိမျးခွငျးဖွငျ့လညျးကောငျး ၊ သောကျခွငျးဖွငျ့လညျးကောငျး သလိပျကိုကွစေသေညျ။ နှလုံးရောဂါ ၊ ဆီးရောဂါ ၊ ညောငျးကရြောဂါမြား ပြောကျကငျးနိုငျသညျ။
သှေးလိမျးခွငျးဖွငျ့ ကိုယျသားကိုယျရကေို အေးမွစပွေီး ယားယံခွငျး ပြောကျစသေညျ။ အမြိုးသမီးမြား မီးယပျနှငျ့ပတျသကျသညျ့
မီးယပျနညျးခွငျး၊ မြားခွငျး၊ မီးယပျဆုံးခြိနျ သှေးခိုးပူမှုတျ၍ခန်ဓာကိုယျတဈကိုယျလုံး(သို့) အစိတျအပိုငျးအလိုကျ ပူခွငျး၊ခြှေးထှကျမြားခွငျး၊
ညအိပျမပြျောခွငျး၊ မီးယပျကှကျ၊ မီးယပျအရပွေားရောဂါ၊ မီးယပျခမျြးထရောဂါမြားကိုပြောကျစနေိုငျသညျ။
သှေးယားခွငျး၊ အရပွေား၌ အဖု၊ အပိနျ့ထှကျခွငျးအတှကျ ကရမကျအတုံး၊ ဧကရာဇျမွဈ၊သကွား ကျောဖီဇှနျး(၁) ဇှနျး ရောစပျ၍ နံနကျ၊ ည သောကျပေးနိုငျသညျ။
ရငျတုနျ၊ နှလုံးခုနျ၊ မူးဝေ၍ အိပျမပြျောသူမြား
အတှကျ ကရမကျ၊ ဇီးစအေ့ဆနျ၊ သကွား ဆတူရောကာအမှုနျ့ပွု၍ ကျောဖီဇှနျး(၁) ဇှနျး တဈနေ့(၂) ကွိမျ၊ ရကေကျြအေးဖွငျ့သောကျနိုငျသညျ။
သှေးစုနာ၊ အနာစာဥ၊ အဖုအကြိတျနာမြားအတှကျ
ကရမကျ၊ နံ့သာဖွူ၊ ဇာတိပ်ဖိုလျသီးအဆနျ(၃) မြိုး ရောသှေး၍ တဈနေ့(၄) (၅) ကွိမျ လိမျးပေးပါက ပြောကျကငျးနိုငျသညျ။
မီးတှငျခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ဇကျကွောထိုးခွငျး၊ မကျြရိုးကိုကျ၍ ခေါငျးအုံ၊ ခေါငျးမကွညျလငျခွငျးအတှကျ ကရမကျအစကို အနညျးငယျယူပွီး နနှငျးမှုနျ့နှငျ့ ဆတူရော၍ မီးခဲပျေါ တငျပွီး အငှမှေို့ငျးကိုရှူပေးလြှငျ ခကျြခွငျးသကျသာစသေညျ။
ကရမကျကို ဆနျဆေးရညျ ဒုတိယအရညျနှငျ့ ရောသှေးပွီး ဆေးရညျ ဟငျးစားဇှနျ(၁) ဇှနျးတှငျ သကွားဇှနျးတဈဝကျ၊ သံပုရာရညျဇှနျးတဈဝကျ ပေါငျးပွီး ဟငျးစားဇှနျး(၂) ဇှနျးခနျ့အား နံနကျ၊ ညသောကျပေးနိုငျသညျ။
ကရမကျ၊ ဥပသကာမွဈ (၂) မြိုးသှေးကာ ဟငျးစားဇှနျး(၁) ဇှနျးတှငျ သံပုရာရညျ ဇှနျးတဈဝကျ ထညျ့ပွီး တနေ့(၂)ကွိမျ စှဲသောကျပါ။
ကရမကျ ပဈြပဈြသှေးကာ တရျောကငျပှနျးရညျနှငျ့ စပျ၍ မကွာခဏလိမျးပေးပါ။
ကလေးမြား အနာမီး၊ အနာစကျရောဂါမြားအတှကျ
ကရမကျ၊ သွဇာသီးအခွောကျ၊ အုနျးဆီနှငျ့ရောသှေးပွီး အနာကို မကွာခဏလိမျးပေးပါကသကျသာပြောကျကငျးနိုငျခွငျး စတဲ့ကောငျးကြိုးမြားစှာရရှိနိုငျတာ ကရမကျဖွဈပါတယျရှငျ။
Din Din”’ B.A(Hist)Dip. T. Med တိုငျးရငျးဆေးပညာဒီပလိုမာ၊ တဆ.၁၉၁၆
မြန်မာ့ရိုးရာနည်းပညာပါ၊ ငွေမကုန်လူမပင်ပန်းပဲ အလွန်ကောင်းသောနည်းမို့ကူးယူဖော်ပြပေးတာပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ကျင့်သုံး နေပါတယ်။
အသက်အရွယ်ရလာလျင် အပူအပုပ်အခိုးအကင်းများခန္ဓာအတွင်းမှာကိန်းအောင်နေတက်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မလှည့်ပတ်မှုကျဆင်းသွားလို့ပါ။
သန်တုန်းမြန်တုန်း.(၂၃)အရွယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံများအားလည်းကျဆင်းကုန်ကြပါပြီ။ အအိပ်အစားအနေအထိုင်ပြုမူဆောင်ရွက်မှုများလည်းဆင်ခြင်ကြရတော့မှာပါ။
ကံ စိတ် ဥတု အဟာရ နဲ့ သာ အညီနေထိုင်စားသောက်ပြုမူကြပါကုန်။
လူတွေမှာ ငုပ်လှောင်အောင်းနေတဲ့ အပူရှိပါတယ်။ ဒီအပူတွေကို ရေချိုးပြီးမထုတ်ရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ အောင်းပူတွေကို စံနစ်တကျမထုတ်ဘဲ ကန်ထွက်စေမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ရေချိုးနည်း မှန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရောဂါရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ လူတိုင်းအတွက် အောင်းပူတွေ ထွက်စေမယ့် ( အနှိပ်မခံဘဲ )အပူထုတ်တဲ့နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်။
၁ ။ ရေမချိုးခင် အပူထုတ်နည်း မန်ကျည်းရေ ခပ်ကျဲကျဲ ခပ်ပါးပါးလေး ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ပွတ်ပါ။
၂ ။ဆားနည်းနည်းဖြင့် ဘယ်ခြေဖဝါးကို ညာလက်ဖဝါးနဲ့၊ ညာခြေဖဝါးကို ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါးနဲ့ အလျားလိုက် အကြိမ် ၅၀ – ခန့် ပွတ်ပါ။
၃ ။၁၀ – မိနစ်ကြာမှ ရေချိုးပါ။
၄ ။ရေချိုးရာမှာ ရေကို ဝုန်းကနဲ တန်းမချိုးပါနဲ့၊ ခြေရေ လက်ရေကို ဖြစ်သလို စ မလောင်းပါနဲ့၊ ပေါင်အလယ်၊ လက်မောင်းအလယ်၊ အဆီရှိတဲ့နေရာမှာ အပူခိုတာမို့ ပေါင်အလယ် လက်မောင်းအလယ်က စလောင်းပြီး အစွန်အဖျားတွေကိုလောင်းပါ။
ပြီးတော့ မျက်နှာသစ်မယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးချိုးမယ်။ ဒီလို စိတ်ရှည် လက်ရှည်ချိုးပေးရင် အပူတွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်စေပါတယ်။ အထူးမှတ်သားရမှာက ဆားပွတ်ပြီး ရေချိုးပါ။ ရေမချိုးဖြစ်ဘဲ ဆားမပွတ်ပါနဲ့။
ည အခါညစ်ပေလို့ ခြေထောက်ကို ရေဆေးရင်လည်း ခြောက်အောင်ပြန်သုတ်ပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ရင် မျက်စိနာတတ်တယ်၊ မျက်ဝတ်တွေ ထွက်တတ်ပါတယ်။
အပူထုတ်နည်းနောက်တစ်မျိုးကတော့ ရေချိုးရင် မန်ကျည်းသီးsalt scrubလေးခြေဖဝါးကိုအရင်ပွတ်တယ် ခြေဖဝါးကနေတဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းထိတက်သွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကိုပွတ်တယ်
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ရေချိုးချလိုက်‌တယ် ပြီးလျင် မန်ကျည်းဆပ်ပြာလေးတိုက်ပါတယ် salt scrubမသုံးဖစ်တဲ့ရက်တွေမှာ အပူတွေထပ်မံထွက်ပြီး အသားအရည်ကြည်လင်အောင် သဘာဝမန်ကျည်းအနှစ်ကိုပါ တကိုယ်လုံးပွတ်တိုက်ပါတယ် ။
ရေချိုးပြီး ကရမက်၊သနပ်ခါးကို‌‌ ခြေဖဝါးကနေစတင်ကာတစ်ကိုယ်လုံး လိမ်းလိုက်ပါတယ် ကရမက်၊သနပ်ခါး အစွမ်းက‌တော့ ပြောစရာမလိုအောင်အပူကိုစုတ်ထုတ်ပြီး
မြန်မာဆေးကျမ်းများအလိုအရ ..ကရမက်သည်ခါးသက်သော အရသာရှိပြီးချိုသည်။ အေးကာ သလိပ်ကိုဖြစ်စေသည်။ လေကို တိုးစေသည်။
အမြစ် ၊ အသားကိုသွေး၍ လိမ်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ သောက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း သလိပ်ကိုကြေစေသည်။ နှလုံးရောဂါ ၊ ဆီးရောဂါ ၊ ညောင်းကျရောဂါများ ပျောက်ကင်းနိုင်သည်။
သွေးလိမ်းခြင်းဖြင့် ကိုယ်သားကိုယ်ရေကို အေးမြစေပြီး ယားယံခြင်း ပျောက်စေသည်။ အမျိုးသမီးများ မီးယပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်
မီးယပ်နည်းခြင်း၊ များခြင်း၊ မီးယပ်ဆုံးချိန် သွေးခိုးပူမှုတ်၍ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံး(သို့) အစိတ်အပိုင်းအလိုက် ပူခြင်း၊ချွေးထွက်များခြင်း၊
ညအိပ်မပျော်ခြင်း၊ မီးယပ်ကွက်၊ မီးယပ်အရေပြားရောဂါ၊ မီးယပ်ချမ်းထရောဂါများကိုပျောက်စေနိုင်သည်။
သွေးယားခြင်း၊ အရေပြား၌ အဖု၊ အပိန့်ထွက်ခြင်းအတွက် ကရမက်အတုံး၊ ဧကရာဇ်မြစ်၊သကြား ကော်ဖီဇွန်း(၁) ဇွန်း ရောစပ်၍ နံနက်၊ ည သောက်ပေးနိုင်သည်။
ရင်တုန်၊ နှလုံးခုန်၊ မူးဝေ၍ အိပ်မပျော်သူများ
အတွက် ကရမက်၊ ဇီးစေ့အဆန်၊ သကြား ဆတူရောကာအမှုန့်ပြု၍ ကော်ဖီဇွန်း(၁) ဇွန်း တစ်နေ့(၂) ကြိမ်၊ ရေကျက်အေးဖြင့်သောက်နိုင်သည်။
သွေးစုနာ၊ အနာစာဥ၊ အဖုအကျိတ်နာများအတွက်
ကရမက်၊ နံ့သာဖြူ၊ ဇာတိပ္ဖိုလ်သီးအဆန်(၃) မျိုး ရောသွေး၍ တစ်နေ့(၄) (၅) ကြိမ် လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်းနိုင်သည်။
မီးတွင်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်ကြောထိုးခြင်း၊ မျက်ရိုးကိုက်၍ ခေါင်းအုံ၊ ခေါင်းမကြည်လင်ခြင်းအတွက် ကရမက်အစကို အနည်းငယ်ယူပြီး နနွင်းမှုန့်နှင့် ဆတူရော၍ မီးခဲပေါ် တင်ပြီး အငွေ့မှိုင်းကိုရှူပေးလျှင် ချက်ခြင်းသက်သာစေသည်။
ကရမက်ကို ဆန်ဆေးရည် ဒုတိယအရည်နှင့် ရောသွေးပြီး ဆေးရည် ဟင်းစားဇွန်(၁) ဇွန်းတွင် သကြားဇွန်းတစ်ဝက်၊ သံပုရာရည်ဇွန်းတစ်ဝက် ပေါင်းပြီး ဟင်းစားဇွန်း(၂) ဇွန်းခန့်အား နံနက်၊ ညသောက်ပေးနိုင်သည်။
ကရမက်၊ ဥပသကာမြစ် (၂) မျိုးသွေးကာ ဟင်းစားဇွန်း(၁) ဇွန်းတွင် သံပုရာရည် ဇွန်းတစ်ဝက် ထည့်ပြီး တနေ့(၂)ကြိမ် စွဲသောက်ပါ။
ကရမက် ပျစ်ပျစ်သွေးကာ တရော်ကင်ပွန်းရည်နှင့် စပ်၍ မကြာခဏလိမ်းပေးပါ။
ကလေးများ အနာမီး၊ အနာစက်ရောဂါများအတွက်
ကရမက်၊ သြဇာသီးအခြောက်၊ အုန်းဆီနှင့်ရောသွေးပြီး အနာကို မကြာခဏလိမ်းပေးပါကသက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ခြင်း စတဲ့ကောင်းကျိုးများစွာရရှိနိုင်တာ ကရမက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Din Din”’ B.A(Hist)Dip. T. Med တိုင်းရင်းဆေးပညာဒီပလိုမာ၊ တဆ.၁၉၁၆
Categories ကျန်းမာရေးသုတ Tags အပူထုတျ Post navigation
အိမျမှာ အပငျစိုကျဝါသနာပါတဲ့ သူတှေ သိထားသငျ့တဲ့ အပငျနိမိတျ